2 January 2020 - Ministry of Education
အခြေခံပညာကျောင်းသားအားကစားပွဲတော် ပိတ်ပွဲနှင့် ညစာစားပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
Date :2January, 2020
January 2, 2020 - 11:42 pm | News
Comments Off on အခြေခံပညာကျောင်းသားအားကစားပွဲတော် ပိတ်ပွဲနှင့် ညစာစားပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
နေပြည်တော် ဇန်နဝါရီ ၂ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ အခြေခံပညာကျောင်းသားအားကစားပွဲတော် ပိတ်ပွဲနှင့် ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့ညနေ ၅နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်အားကစားလေ့ကျင့်ရေးစခန်း Gold Camp ၌
January 2, 2020 - 8:21 pm | Video
January 2, 2020 - 8:16 pm | Video
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲ ကြီးကြပ်ရေးမှူးများ၊ တွဲဖက်ကြီးကြပ်ရေးမှူးများ၊ လက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှူးများနှင့် စာဖြေသူများလိုက်နာရန် စည်းကမ်းချက်များဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ သင်တန်းတက်ရောက် ဆွေးနွေးပြောကြား
Nepal Ambassador H.E. Mr. Bhim K.Udas အား တွေ့ဆုံ
January 2, 2020 - 7:09 pm | Album
Comments Off on Nepal Ambassador H.E. Mr. Bhim K.Udas အား တွေ့ဆုံ
နေပြည်တော် ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ ၂ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးနှင့်အဖွဲ့သည် ၂-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့ ၁၃ ၀၀ နာရီတွင် Nepal Ambassador H.E.
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲ ကြီးကြပ်ရေးမှူးများ၊ တွဲဖက်ကြီးကြပ်ရေးမှူးများ၊ လက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှူးများနှင့် စာဖြေသူများ လိုက်နာရန် စည်းကမ်းချက်များဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲသင်တန်း တက်ရောက်ဆွေးနွေးပြောကြား
January 2, 2020 - 6:47 pm | News
Comments Off on ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲ ကြီးကြပ်ရေးမှူးများ၊ တွဲဖက်ကြီးကြပ်ရေးမှူးများ၊ လက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှူးများနှင့် စာဖြေသူများ လိုက်နာရန် စည်းကမ်းချက်များဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲသင်တန်း တက်ရောက်ဆွေးနွေးပြောကြား
နေပြည်တော် ဇန်နဝါရီ ၂ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးသည် ၂၊ ၁၊ ၂၀၂၀ ရက်နေ့ နံနက် ၈နာရီ၁၅မိနစ် တွင် ပျဉ်းမနားမြို့ အမှတ်(၂)အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၌ ကျင်းပလျက်ရှိသော